Sida loo sameeyo astaanta Apple ee iPhone 6 light up | Wararka IPhone
Sida loo sameeyo astaanta Apple ee iPhone 6 light up
Waxaa jira muuqaal aad loo aqoonsan karo oo ka mid ah Macbook oo dad badani sidoo kale ay jecelyihiin aaladaha IOS, runtii waxaan ka hadlaynaa tufaaxaas gadaal ka ifaya ee Apple ay dhigtay kumbuyuutarradeeda tan iyo sanadkii 2009. Sikastaba, tufaaxa gadaal u ifaya ee iPhone-ka ayaa durba bilaabay inuu soo baxo 4 iyo 4s. iyagoo ka faa’iideysanaya muraayaddeeda gadaal adoo adeegsanaya LED-yada fudud ee ku shaqeeya qalabka. Hadda waxaan ogaanay in tani ay sidoo kale macquul tahay qalabka iPhone 6 iyo 6s sidaa darteed waxaan ku siin doonnaa kooban kooban sida aad u sameyn karto.
Runtii kama fikirayo wax aan sameeyo, laakiin waxaan haysanaa dad badan oo adeegsadayaal ah oo ku faraxsan suurtagalnimada in tufaaxooda laga dhigo mid ifaya sida qorraxda subax. Shaqadani sidoo kale waa mid xiiso leh, markaa waan ka faalloon doonnaa. Sannadba sanadka ka dambe ayaan sugaynay Apple inuu dhigo tufaax gadaal u xirta iPhone, laakiin kuma soo dhuuman ilaa hada. Si kastaba ha noqotee, waxaad leedahay bedel kale, oo ah "xirmo" rakib ah oo fudud oo ay gaari karaan ku dhowaad qof kasta oo waxoogaa berrito ah la jooga shaandheeyaha, waxaan kuu daayeynaa fiidiyoow ah sida loo rakibay iyo sida ay u shaqeyso.
Xaqiiqdii maahan inay kugu qaadato wax ka badan nus saac inaad rakibto, ama toban daqiiqo haddii aad horeyba ugu baratay kor u qaadista iyo furidda aaladaha Apple. In ka yar € 20 waad heli kartaa xirmadan oo noo oggolaan doonta inaan iftiimino tufaaxa iPhone-keena sidaa darteed waxaan shaki la'aan ku haysanaa iPhone-ka ugu badan "moodada" aagga. In kasta oo dabcan, ma naqaano inay ku bixinayso halista aad adigu ugu dallaci karto aaladda "siyaada ah". Waxaad sidoo kale haysataa suurtagalnimada inaad iibsato oo aad u gayso SAT xirfadle ah, in kasta oo la ogyahay dhibaatooyinka ka dhashay Error53 haddana durba waa cabsi yar tahay in la furo iPhone-keena oo halista ugu jira in aannu kaga tagno miisaan culus oo warqad leh. Dabcan, dhiirran, tani waa sida ugu wanaagsan ee wax loo barto, oo tufaaxa iPhone-kaaga uga dhigo mid ifaya adoo iibsanaya QALABKAAN on Amazon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo sameeyo astaanta Apple ee iPhone 6 light up
Tani waa waxa aan marwalba doonayay inaan sameeyo! More Inbadan ayaan baari doonaa! Mahadsanid!
Waad salaaman tahay, waxaan kaa raacayaa Chile.
halista uguma jiro inuu tuuro khalad markii uu sameynayo?
aad u fiican laakiin kuma dhicin inaan sameeyo.
Sidee uga iibsan kartaa qalabkaas Spain?
Tufaax u fiirso iphone7 ama 8
Oops, taleefankayga iPhone 6 aad buu u fiicnaan lahaa, cabsidu waxay tahay in Apple xannibi doono, isticmaalka batteriguna aad buu u badnaan lahaa? Way fiicnaan laheyd haddii ay sameeyaan qoraal ay ku sharxayaan faa iidooyinka iyo qasaarooyinka tan.
Waa inaad noqotaa…, inaad furto € 1000 mobiil si nal looga daarto La Manzanita…., Qofka bini aadamka waa mid aan caadi aheyn !!!! hehehehe
Hahaha Antonio waad saxantahay, laakiin hadii ay dul dhigaan ogeysiis Led, qalabku wuxuu kor u qaadayaa 100 doolar in ka badan maxaa yeelay waa Led aan waligiis horay loo arkin iyo in uusan u muuqan tartanka (waa la ciribtiri lahaa) markaa way na iibinayaan telefoonka gacanta haha ​​ka qaalisan
runti shaashadda ayaa daaran haddii ay wax kuu soo diraan, haddii aad rabto in wax la hoggaamiyana, waxaad ka dhigi kartaa flash-ka inuu baaba'o ayaan u maleynayaa. ugu yaraan wicitaanada
Aad u fiican waxaan kugu hambalyeynayaa sida ugu fiican.
Edgar Duarte Valenzuela dijo
Subax wanaagsan, sidee ayaan jadwal ugu sameeyaa farriinta WhatsApp-kayga ku jirta iPhone-kayga si loogu diro taariikhda iyo waqtiga uu isticmaalaha doonayo.
Jawaab Edgar Duarte Valenzuela
Codsiga Comuniame wuxuu gaaraa iOS App Store